ဒါဘီနဲ့ ပွဲမှာ လူမျိုးရေးခွဲခြားခံခဲ့ရတဲ့ မန်ချက်စတာယူနိုက်တက်ကွင်းလယ်လူ လင်ဂတ် – Sports A2Z
ဒါဘီနဲ့ ပွဲမှာ လူမျိုးရေးခွဲခြားခံခဲ့ရတဲ့ မန်ချက်စတာယူနိုက်တက်ကွင်းလယ်လူ လင်ဂတ်
ကြာသပတေးနေ့က ဒါဘီကောင်တီနဲ့ အက်ဖ်အေဖလား ပဉ္စမအဆင့်ပွဲစဉ်မှာ ကွင်းလယ်လူ ဂျက်ဆီ လင်ဂတ်ကို လူမျိုးရေးခွဲခြားလှောင်ပြောင်ခဲ့တဲ့ ပရိသတ်ကို ဖော်ထုတ်နိုင်ဖို့ မန်ချက်စတာယူနိုက်တက်အသင်းတာဝန်ရှိသူတွေက စုံစမ်းစစ်ဆေးမှုတွေ ပြုလုပ်နေပါတယ်။
မန်ချက်စတာယူနိုက်တက်က ဒါဘီကို အနိုင်ရခဲ့တဲ့ အဲဒီပွဲအပြီးမှာ ဂျက်ဆီလင်ဂတ်နဲ့အတူ အသင်းသားတွေအားလုံး ကားပေါ်တက်ဖို့လုပ်နေတုန်းမှာ ပရိသတ်တစ်ဦးက လင်ဂတ်ကို ရည်ရွယ်ပြီး နစ်ဂါဆိုတဲ့ အသားအရောင်ခွဲခြားပြီး ကြမ်းတမ်းတဲ့ အသုံးအနှုန်းကို ထပ်တလဲလဲ အော်ပြောဆိုခဲ့ပါတယ်။
A good nights work, onto the quarters ?? always nice to see you legend @WayneRooney ? pic.twitter.com/fRrHtd9VgH
— Jesse Lingard (@JesseLingard) March 5, 2020
လင်ဂတ်ဟာ ပရိုက်ပါ့ခ်က အက်ဖ်အေဖလားပွဲစဉ်မှာ ပွဲချိန်ပြည့် ၀င်ရောက်ကစားသွားခဲ့ပြီး တခြားပရိသတ်တွေကလည်း သူ့ကို အော်ဟစ်ဆဲဆိုခဲ့တာတွေ ရှိခဲ့ပါတယ်။ ဒါ့အပြင် ပရီးမီးယားလိဂ်မှာ လင်ဂတ် ဂိုးမသွင်းနိုင်တာနဲ့ ဂိုးဖန်တီးမှု မလုပ်ပေးနိုင်တာကို ရည်ရွယ်ပြီး အော်ဟစ်လှောင်ပြောင်ခဲ့တဲ့ ပရိသတ်တွေလည်း ရှိခဲ့ပါတယ်။
မန်ချက်စတာယူနိုက်တက်တာဝန်ရှိသူတွေကတော့ ဒီဖြစ်ရပ်ကို သိသိချင်း ဒါဘီရှိုင်းယားဒေသ ရဲတပ်ဖွဲ့ကို တိုင်ကြားခဲ့သလို ရဲတပ်ဖွဲ့ဘက်ကလည်း လိုအပ်တဲ့ အချက်အလက်တွေကို မျက်မြင်သက်သေတွေဆီကတဆင့် တောင်းဆိုထားပြီး စီစီတီဗီမှတ်တမ်းတွေကိုလည်း စုံစမ်းစစ်ဆေးနေတယ်လို့ ဆိုပါတယ်။
မန်ချက်စတာယူနိုက်တက်အသင်းက လူမည်းကစားသမားတွေဟာ ဒီရာသီတစ်လျှောက်လုံး ပစ်မှတ်ထားလှောင်ပြောင်ခံနေရပြီး ရာသီအစပိုင်းကလည်း ပေါ့ဘာ၊ ရက်ရ်ှဖို့ဒ်နဲ့ ဖရက်တို့တွေလည်း အလားတူ လှောင်ပြောင်ခံခဲ့ရသလို ဖမ်းဆီးအရေးယူမှုတွေလည်း ရှိခဲ့ပြီး ရာသီအစက ၀ုလ်ဗ်စ်နဲ့ တစ်ဂိုးစီသရေကျခဲ့တဲ့ပွဲမှာ ပင်နယ်တီလွဲချော်ခဲ့တဲ့ ပေါ့ဘာကိုလည်း အသက်အန္တရာယ်ခြိမ်းခြောက်တဲ့အထိ ဖိအားပေးခဲ့တဲ့ အဖြစ်မျိုးတွေလည်း ကြုံခဲ့ရကြောင်း သိရှိရပါတယ်။
UNICODE: ကွာသပတေးနကေ့ ဒါဘီကောငျတီနဲ့ အကျဖျအဖေလား ပဉ်စမအဆငျ့ပှဲစဉျမှာ ကှငျးလယျလူ ဂကျြဆီ လငျဂတျကို လူမြိုးရေးခှဲခွားလှောငျပွောငျခဲ့တဲ့ ပရိသတျကို ဖျောထုတျနိုငျဖို့ မနျခကျြစတာယူနိုကျတကျအသငျးတာဝနျရှိသူတှကေ စုံစမျးစဈဆေးမှုတှေ ပွုလုပျနပေါတယျ။
မနျခကျြစတာယူနိုကျတကျက ဒါဘီကို အနိုငျရခဲ့တဲ့ အဲဒီပှဲအပွီးမှာ ဂကျြဆီလငျဂတျနဲ့အတူ အသငျးသားတှအေားလုံး ကားပျေါတကျဖို့လုပျနတေုနျးမှာ ပရိသတျတဈဦးက လငျဂတျကို ရညျရှယျပွီး နဈဂါဆိုတဲ့ အသားအရောငျခှဲခွားပွီး ကွမျးတမျးတဲ့ အသုံးအနှုနျးကို ထပျတလဲလဲ အျောပွောဆိုခဲ့ပါတယျ။
လငျဂတျဟာ ပရိုကျပါ့ချက အကျဖျအဖေလားပှဲစဉျမှာ ပှဲခြိနျပွညျ့ ဝငျရောကျကစားသှားခဲ့ပွီး တခွားပရိသတျတှကေလညျး သူ့ကို အျောဟဈဆဲဆိုခဲ့တာတှေ ရှိခဲ့ပါတယျ။ ဒါ့အပွငျ ပရီးမီးယားလိဂျမှာ လငျဂတျ ဂိုးမသှငျးနိုငျတာနဲ့ ဂိုးဖနျတီးမှု မလုပျပေးနိုငျတာကို ရညျရှယျပွီး အျောဟဈလှောငျပွောငျခဲ့တဲ့ ပရိသတျတှလေညျး ရှိခဲ့ပါတယျ။
မနျခကျြစတာယူနိုကျတကျတာဝနျရှိသူတှကေတော့ ဒီဖွဈရပျကို သိသိခငျြး ဒါဘီရှိုငျးယားဒသေ ရဲတပျဖှဲ့ကို တိုငျကွားခဲ့သလို ရဲတပျဖှဲ့ဘကျကလညျး လိုအပျတဲ့ အခကျြအလကျတှကေို မကျြမွငျသကျသတှေဆေီကတဆငျ့ တောငျးဆိုထားပွီး စီစီတီဗီမှတျတမျးတှကေိုလညျး စုံစမျးစဈဆေးနတေယျလို့ ဆိုပါတယျ။
မနျခကျြစတာယူနိုကျတကျအသငျးက လူမညျးကစားသမားတှဟော ဒီရာသီတဈလြှောကျလုံး ပဈမှတျထားလှောငျပွောငျခံနရေပွီး ရာသီအစပိုငျးကလညျး ပေါ့ဘာ၊ ရကျရျှဖို့ဒျနဲ့ ဖရကျတို့တှလေညျး အလားတူ လှောငျပွောငျခံခဲ့ရသလို ဖမျးဆီးအရေးယူမှုတှလေညျး ရှိခဲ့ပွီး ရာသီအစက ဝုလျဗျဈနဲ့ တဈဂိုးစီသရကေခြဲ့တဲ့ပှဲမှာ ပငျနယျတီလှဲခြျောခဲ့တဲ့ ပေါ့ဘာကိုလညျး အသကျအန်တရာယျခွိမျးခွောကျတဲ့အထိ ဖိအားပေးခဲ့တဲ့ အဖွဈမြိုးတှလေညျး ကွုံခဲ့ရကွောငျး သိရှိရပါတယျ။
ထိရောက်တဲ့ တိုက်စစ်ကသာ အဖြေဖြစ်ကြောင်း ဂွါဒီယိုလာ သဘောပေါက်သွားသင့်တဲ့ မန်ချက်စတာဒါဘီ
မိုက်ကယ် အိုဝင်နောက်ပိုင်း သုံးရာသီဆက်တိုက် ဂိုး ၂၀ နဲ့အထက် ပထမဆုံးသွင်းနိုင်သူဖြစ်လာခဲ့တဲ့ ဆာလား